Lahatsoratra nataon'i Sarah Saker ao amin'ny Martech Zone »
Lahatsoratra nosoratan'i Sarah Saker
Sarah Saker dia mpanazatra mpandraharaha sy mpanoratra tsy miankina izay manampahaizana manokana amin'ny fanampiana ireo dingana fananganana SMB ho fanohanana ny mpanjifa sy fitomboana azo vinavinaina. Rehefa tsy manoratra na manazatra, i Sarah dia hita ao amin'ny tanimboliny (kely, nefa mitombo!). Mifandraisa amin'i Sarah amin'ny about.me/ssaker ho an'ny fanampiana coaching na fanoratana.
Fampiharana telo ilainao hampandehanana tsara ny orinasanao ecommerce
Talata, Desambra 18, 2018 Alatsinainy Janoary 27, 2020 Sarah Saker
Fotoana famakiana: 4 minitra Be dia be ny mpivarotra ecommerce any - ary anisan'ireny ianao. Ao anatin'izany mandritra ny fotoana maharitra ianao. Araka izany, mila mahay mifaninana amin'ny fivarotana an-jatony an'arivony tsara indrindra amin'ny Internet ianao ankehitriny. Fa ahoana no anaovanao an'izany? Tokony ho azonao antoka fa manintona araka izay tratra ny tranokalanao. Raha ratsy endrika izy io, tsy manana anarana tsara,